Ny fanasitranana esoterika - Alice Bailey (PDF) - Afrikhepri Fondation
FANDROSOANA NY COVID
alakamisy 22 aprily 2021
Trano famakiam-boky Ebook
Sarimihetsika ho jerena
Ny zava-misy ara-tsosialy
Hatsaran-tarehy sy ny lamaody
Kabary nataon'ny mpitondra
Fifandraisana Boky PDF
Fanasitranana esoterika - Alice Bailey (PDF)
Par Foundation Afrikhepri
Vakiteny: 2 min
LNy fanasitranana dia siansa marina iray mifototra amin'ny isan'ny fividianana taloha, izay anisany ny fahalalana ny lalàm-panorenan'ny olombelona, ​​ireo vatana samihafa mamorona azy, manomboka amin'ny henjana indrindra ka hatramin'ny faran'izay malemy indrindra, amin'ireo hery samihafa tafiditra amin'izany. miasa ao aminy, ary koa psikolojia sy fanahy manandro indrindra indrindra.
Ny mpitsabo dia tsy maintsy mitady ny hampivondrona ny fanahiny, ny fony, ny ati-dohany ary ny tanany. Io dia mamela azy hizara hery velona manasitrana ny marary. Toy izany ny asan'ny andriamby, izay afaka manasitrana ny aretina na mampitombo ny fihevitr'ilay marary heverina ho ratsy, araka ny fahalalan'ilay mpanasitrana. Ny mpitsabo dia tsy maintsy mitady hampivondrona ny fanahiny, ny ati-dohany, ny fony ary ny fahatsapana ny aura. Noho izany, ny fisiany dia afaka mamelona ny ain'ny marary. Toy izany ny asan'ny taratra. Tsy ilaina ny tanana. Mampiely ny heriny ny fanahy. Ny fanahin'ilay marary dia mamaly amin'ny fihetsiky ny aura manoloana ny taratra ny aura an'ny mpitsabo, mibontsina amin'ny herin'ny fanahy.
Ny mpitsabo dia tokony hahatratra ny fahadiovana andriamby amin'ny alàlan'ny fahadiovany amin'ny fiainany. Izy io dia tsy maintsy afaka mamoaka ny taratra miparitaka izay miseho amin'ny lehilahy rehetra izay nampivondrona ny ivon'ny lohan'izy ireo. Rehefa apetraka ity sahan'andriamby ity dia misy ny taratra.
Avelao ny mpitsabo hampiofana ny tenany hahafantatra ny sehatra anatiny ao an-tsaina na fanirian'ny olona mitady ny fanampiany. Ho hainy amin'izay ny loharano niavian'ny olana. Avelao izy avy eo hampifandray ny antony amin'ny vokany ary hahafantatra ny teboka marina tokony hidiran'ny fanamaivanana.
Ny mpitsabo sy ny vondrona manasitrana dia tsy maintsy mitazona ny finiavana amin'ny tadiny. Tsy ny finiavana no tsy maintsy ampiasaina fa ny fitiavana.
Ny fanasitranana esoterika, ny volume 4
4 vaovao avy amin'ny € 33,47
10 ampiasaina amin'ny € 29,00
Vidio € 33,47
Nohavaozina farany tamin'ny 22 aprily 2021 11:19 maraina
Fanoloran-kevitra momba ny lahatsoratra
Ny fahatsorana ao amin'ny fahasalamana ara-panahy - Mooji (Video)
Lahateny nataon'i Hugo Chavez tamin'ny fivoriambe faha-61 an'ny Firenena Mikambana
Fisarahana karazany iray - Documentary (2019)
Mediam-bahoaka lehibe manome 20 Jolay 2019 ho daty farany ho an'ny zanak'olombelona
Iza no nisarika ny sisin-tany tany Afrika?
Tsy misy valiny
MISAOTRA NY FIZARANA
Tsindrio eto raha hanidy ity hafatra ity!
Ity fikandrana ity dia hikatona ho azy ao anatin'ny segondra 7
Manampia lisitra vaovao
- Misafidiana fahitana -PublicPrivate
Alefaso amin'ny namana izany